Somaliland region poet Cabdi Good says his life is threatened after he criticized Ismail Omar Gueleh - Politics - Somali Forum - Somalia Online
Good should be careful, doqon reerka baa loo soo diri.
Who listens to this marqaanle horta? Waxaaba ugu daran markuu lahaa aqoonyahan ku xeeldheer afka Soomaaliga iyo isirkiisa aan ahay asagoo BTJ soo dhigan. Wuxuu ku maqli jiray marfishyada London uu mooday aqoon.
Wuxuu ogyahay iney suurtagal tahay in hargeysa Dhexdeeda lagu dili karo. Waxa ka hadashiinayaa waa cabsi ku soo dagtay markey sakhradii ka ba'day. Malintii ku xigtay markuu dib u sakhraamay ayu filimkan soo alifay.
He is follow by people who would not listen to your niic even if they were paid tons of dollar bills.
Orodoo bal adigu kusoo dil aanu ku aragnee.
Cabdi Good Abees "...maanta hadaan duri u dhinto, Reer Somaliland way garanayaan halka loo raacaayo magtayda..." kaka
This reminds me of the classic Great Hargeisa Goat Bubble early 90s, You can listen to BBC Radio version of the story below.
I think this is a good opportunity to bankrupt Djibouti. Qofkii Hargeisa si natural ah ugu dhinta, IOG ayaa ka danbeeya taa ha la ogaado. Magtiisa Djibouti ha bixiso. kakak
Haduu sidaa u baqayo, markii horeba maysan ahayn inuu highway aado, ama uu ka gudbo heesihii uu dumarka u fasiri jiray.
Sirdoonka wax dila qof kasta iskama dilaan, waa ciyaal yaryar waxa hurdada u diiday.
Koonfurta ayaa dhaqankaa laga yaqaan qofka $20 lagu dilaayo. Somaliland waxaa lagama yaqaan.
Somaliland oo bakhtigu xalaal u yahay 1994kii ayay Djibouti wax ka qaadi kari wayday oo Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal sutida u qabtay. Macadallah, Somaliland oo maanta Qaran taaba galay oo sare u istaagay noqotay.
Cabdi Good na waa ka guubaabo kali ah. Waa ogyahay inaan Djibouti ku dhici karin inay Somaliland ka abuurto khalkhal.
Hal Madfac oo Looyacaddo ka liishaano ayaa toos ugu dhacaaya qasriga madaxtooyadda Djibouti. In fact, Reer Djibouti simcard Somaliland leeday ayay wada sitaan, sabatu signal Tower'ka Loyacaddo ku yaal ayaa Djibouti gaadha.
Rag ka weyn oo dawladaha reer galbeedka ka socda aakhiro loo diray mise waa sakhraan mirqaansan oo maryo-alol u been sheegtay. Attention bey jeegaantu raadinayaan. Munaafaqada jeegaantu wey ku takhasuustay. Waataa West Burco Clan geedka ku xidhay, Gabooye la simtay, Gumeysay Gobtii reer sheikh isaxaq. Lkn jabuuti West Burco Clan maaha.
Ma waxa la arkay dad Islaam sheeganaya, oo calanka Tawheedkii ku qortay, oo hadana u Buka saxiixa masiixi Ingiris-Cade?
IOG isago qalalan bu idin galaa, isago qoyan'na wuu idinka soo baxaa. Meeshu idinka galayna wuu kasoo baxaa.
26 minutes ago, Ducale said:
IOG isago qalalan bu idin galaa, isago qoyan'na wuu idinka﻿﻿ soo ba﻿xaa﻿. Meeshu idinka ﻿galayna wuu kasoo baxaa.
There is a difference between anti-somaliland iyo anti Maryo-alool A.K.A Jeegaan.
Maryo Alool waxa naaxiyay waa G'arxajiska.
Jahawareer iyo khalkhal
Finally Gunnimo beesha Siilanyo iyo Muuse biixi ay gaadhsiiyeen. Waa Dad is gumeeyay oo raba iney Djibouti nijaasnimada isku ilawsiiyaan.
Djibouti Cadawgeedu wuu jabi inshallah.
G'arxajisna Gunimoda la baday wuu ka bixi inshallah.
43 minutes ago, Barwaaqo said:
Hadaba su'aashu waxay tahay, xabashiyada dhasheeda loo ogolaaday iney magaca nala wadaagaan ya Jiifiyay?
Somaliland dhaqanka beeleysiga mataqan waliba durriyadu wa isku hal aragti siyaasiyan wa cilmiyan . Ducaale wuxu is leeyahay somalilanderska ayaan beelo ukalaqeybin kara yaa kusheega Somaliland election season is over. Jabuutina cidna cadawkuma aha iyadu uun ba isku furtay frontyefarabadan